Puntland Observer | Archive | Sheekooyinka
Home » Archives by category » Sheekooyinka
Buuggayga Ma Akhriyo
Buuggayga Ma Akhriyo Afo la oran jirey Marwo Filib ayaa odaygeeda, Mudane Filib, ahaa nin wax akhrinta habaar ku qaba. Ooridiisii ayaa jeclaysatay in uu waxna akhristo reerkana uusan illaawin oo wakhtigiisa wax ka siiyo. Kor iyo hoosba way ula hadashay, hayeeshee way ka caalwayday oo is-beddeliwaa. Xaaskii markay aragtay Mudane Filib in wax-akhrintu belwad […]
Bidaarlaha iyo Duulduulaha [Sheekaxayawaannada AESOP]
Bidaarlaha iyo Duulduulaha [Sheekaxayawaannada AESOP] Nin Bidaarle ahaa oo kolkaas shaqo ka soo rawaxay, maalin cadceeddu kululeed xagaana ahayd, ayaa kob hadh leh fadhiistey si uu u nasto. Duulduule ayaa u yimid oo dhakada bidaaartiisa ku dul xiimey oo hadba qaniinyo ku dhufdhuftay. Ninkii wuxuu u tabaabusheeystey in bahalkaa yarka ah u gacanqaado oo kaw uu […]
Webiyada iyo Badda [Sheekaxariirooyinka AESOP]
Webiyada iyo Badda [Sheekaxariirooyinka Aesop] Waa waayada ka mid ah ayaa dhammaan Webiyada isu yimaaddeen si ay uga ashtakoodaan falka Baddu sameeyso, kaas oo ah in biyahoodu ay milix u rogto. “Kolkaannu adiga kuu nimaadno,” ayay Baddii ku yidhaahdeen, “waannu macaannahay oo waa nala cabbi karaa: hase ahaatee, goortaannu muddo gaaban kula joogno oo aannu […]
Qofkeenna Ma Dhamma
Qofkeenna Ma Dhamma Inan da’ yar oo inankay jeclayd, Shiikh Nasruddiin Xoja, xoog uga cadhootay, ayaa ku tidhi, “Allaylehe, nacasnimo way kugu wada dhantahay!” Kuye Nasruddiin: “Heedhe, iga daa sabaasha iyo likaacada, qofkeenna ma dhamma oo wax baa inaga wada dhimman!” Sheekooyinka Shiikh Nasruddiin Xoja [noolaa qarnigii 13aad ee miillaadiga]
Wax Kaa Khuseeya Ma Jiro
Wax Kaa Khuseeya Ma Jiro Isagoo hoygiisii ku sii jeeda, waxaa Xoja joojiyey nin ay tuulada wada degganaayeen oo xamaasadaysan oo macmacaan hamuungorgoraale ah. “Xojoow, waxaan goor dhoweyd arkay qof sida saxan weyn oo ballaaran oo macmacaan ay ka dhacayso ka buuxo.” “Wax iga khuseeya ma jiro.” “Qofkiise siday wuxuu saxanka weyn oo ballaaran u […]
Bakaylayaasha iyo Rahaha
Bakaylayaasha iyo Rahaha Bakaylayaasha, sidaynnu la wada soconno, xayawaan weeye aad u xishood badan. Sharqanta ugu yar oo uu maqlo baa cabsi gelisa, wuxuuna u farandulleeyaa burkuu ku dhuunto kolkuu nafta u yaabo. Waxay maalin maalmaha ka mid ah go’aansadeen in gunnimaday ku jiraan ay geeriyi dhaanto. Hayeeshee, iyagoo wali arrinkii rogrogaya oo ka doodaya […]
Kumaad Rumeeysanaysaa? Waxaa kadinka deyrka Wadaad Nasruddiin yimid nin ay jaar ahaayeen. Dibedda ayuu ugu soo baxay oo ninkii la kulmay. “Wax miyaad, Shiikhow, ka qabi lahayd,” jaarkii ayaa weyddiiyey, “in aad maanta dameerkaaga i amaahiso? Degmada inagu dhow ayaan alaabo yar ku geeysan lahaa.” Hayeeshee, Wadaadku arrinta sinnaba uguma jajabnayn, gaar ahaan in uu […]
Abees iyo Dabaggaalle
Abees iyo Dabaggaalle Waa baa waxaa jiri jirey Abees boqor ahaa, magaciisana la oran jirey Xuseyl. Abeeskaas baa maalin waxaa u soo dacwooday dabaggaalle quulle meel uu ku xabaashay laga xaday. Markuu dacwaddiisii jeedsanayeyna hadalkii labadooda dhex maray waa kan hoos ku qoran: Dabaggaalle: “Boqor Xuseyl! Quulle baan meel ku xabaashay.” Abees: “Ragga tacab jeclida […]
Adhi iyo Adhirraace
Adhi iyo Adhirraace Adhirraace ayaa damcay ri’ raxantiisa adhiga ka mid ahayd oo ka gooni-daaqday oo ka fogaatay inuu dib u soo celiyo. Wuu u foodhiyey oo buunkiisii u yeedhyeedhiyey, hayeeshee wuu ku guuldarraystay, ka sii daranoo wiciddiisiiba dheg jalaq uma dhiginnin. Ugu dambeeyntii, adhirraacii dhagax ayuu ridii ku halgaaday oo gees ka jebiyey. Kolkuu […]
Roob-ka-daal Qaybta Afraad Afartii galabnimo ayay saacaddu garaacday. Daruurtu aaggii wali kama dulteginnin oo sidii iyo si xoog badan ayuu roobkii u da’ayay. Shaqaalihii goobta waxay iclaamiyeen in aanu jiri doonnin wax tareemmo ah oo London u bixitima ilaa iyo amar dambe. Daadad baa qadhaarkii tareemmada ee Cheltenham ku soo fatahmay. Rugtii wax tareen ah […]